Fifidianana Filoham-pirenena Taiwan · Global Voices teny Malagasy
Fifidianana Filoham-pirenena Taiwan
Voadika ny 04 Janoary 2020 5:40 GMT
Iray amin'ireo vavahady mankany amin'ny toeram-pahatsiarovana Chang Kai-shek ao Taipei. Ny varavarambe dia antsoina hoe 大忠門 izay azo adika hoe Vavahadin'ny Fahatokiana Lehibe. Saripikan'i Filip Noubel, nahazoana alalana.
Manatontosa fifidianana ho filoham-pirenena i Taiwan amin'ny faha-11 ny volana janoary 2020 hamaritra indray ny ho fandehan'ny zotrany ara-politika sy ara-toekarena ao anatin'ny efa-taona. Taorian'ny enimbolana nirotahana ara-politika tao Hong Kong izay nisy fiantraikany amin'ny hevi-bahoaka ao amin'ity nosy ity, tonga ao anatin'ny fotoana saropady ny fifidianana ary maneho ny fisrahana lalina ao amin'ny fiarahamonina Taiwaney.
Ahitana taratra amin'ny fisaraham-bazan'ny mpifidy ireo kandidà telo mifaninana amin'ity fifidianana ity. Raha miantso fanavaozana ara-tsosialy sy politika bebe kokoa ary fanalavirana ara-toe-karena amin'i Shina ny filoha ankehitriny sady kandidà Tsai Ing-wen avy amin'ny Antoko Demaokratika Liam-Pandrosoana (DPP) , dia nanangana sehatra hifanatonana bebe kokoa amin'i Shina, indrindra eo amin'ny sehatry ny varotra sy famatsiam-bola, i Han Kuo-yu, mpihazakazaka avy amin'ny Kuomintang, sady misolotena ireo mpifidy mpandala ny nentin-drazana kokoa. Ary farany, ny kandida James Soong, raha fantatra fa mpikambana ara-tantara tao amin'ny Kuomintang, dia efa nanangana ny paikadiny manokana, eo anelanelan'ny DPP sy ny Kuomintang.
Volavolain'ny lohahevitra manjaka eo amin'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ny fifandraisana amin'i Shina ny ankapobeny amin'ny fanentanana ara-politika. Raha salama tsara ny toekarena amin'ny ankapobeny, ary mahazo tombony amin'ny ady ara-barotra Etazonia-Shina amin'izao fotoana izao aza, dia misy ny fanamby noho ny karama ambany raha atao ny fampitahana sy ny fiakaran'ny vidim-piainana any amin'ny faritra an-tanàndehibe maro. Lohahevitra mampisara-bazana ny fifandraisana amin'i Beijing, satria mifandraika amin'ny resaka ara-toekarena izany, sy amin'ny fahaleovantena ara-diplaomatika, ary mankany amin'ny resaka saro-pady kokoa amin'ny fiandrianam-pirenena ihany koa. Fanontaniana lehibe hafa amin'ny fanentanana ihany koa ny soatoavina ara-moraly sy kolontsaina, ny tontolo iainana ary ny fitokisana ny fampahalalam-baovao.
Raha tsy ahitana ireo lahatsoratra farany eto, dia hitantsika ao amin'ny pejy teny anglisy izany:
Rosia 7 ora izay
Azia Atsimo 11 ora izay